Ukuzivocavoca echibini labesifazane abakhulelwe, izinqubo zamanzi ezinganeni: izinzuzo nezingozi zokubhukuda.
Ukubhukuda: izinzuzo zokubhukuda, ukuzivocavoca emanzini
Umkhuba omuhle ukuya echibini. Futhi impilo iqinisa, futhi iphumule, futhi inika impilo ithoni. Izakhiwo ezizuzisayo ezingu-3 ebhodini eli-1. Futhi okubalulekile - ukuya echibini ukuhlanganisa umndeni. Ngoba ukubhukuda kuyasiza kuwo wonke umuntu kusuka ezincane kuya ezinkulu, nabesifazane abakhulelwe, nabomama abanezingane ezandleni zabo. Ngakho, ichibi: izinzuzo zokubhukuda, ukuzivocavoca emanzini nokufunda okuningi ngezansi.
Kungani ukubhukuda kusebenza?
Ukubhukuda yilohlobo oluthinta kakhulu imidlalo. Okokuqala, ingozi yokulimala ayilutho. Okwesibili, ngisho nomuntu onenkinga ngamalunga, emuva noma ngokweqile, amehlo angakwazi ukuqeqesha echibini; ngisho nalabo ababhekene nezifo lapho imidlalo yezemidlalo iphikisana khona. Phela, emanzini, isisindo somzimba sinciphisa izikhathi ezingamashumi amabili, kanti indoda enesilinganiso esiphakathi emanzini inesisindo esingu-2-3 kilogram. Lokhu okungenasici kukuvumela ukuba usakaze ama diski e-intervertebral emanzini futhi uphumule umgogodla wakho. Ngenxa yalokhu, umuntu "ukhula" ngamasentimitha angu-1-2.
Ngaphezu kwalokho, phakathi nohambo wonke amaqembu amakhulu omzimba ahilelekile. Imisipha yesisu, izingalo, ibhande lehlombe, amathanga, izintambo zisebenza ngokukhethekile. Futhi ukubhukuda kunika nokuguquguquka kwamalunga emathangeni, intamo nezingalo. Ngesikhathi sokubhukuda, hhayi okuningi, kodwa ukuphefumula kuyashesha, ngokufanele, umsebenzi wamaphaphu nenhliziyo uyaqina. Ngakho-ke, lo mdlalo udluliselwa ku-aerobic, kanye nokusebenza, ukuxuma, ukudansa. I-Aerobic isho ukuthi "ukusebenzisa i-oxygen". Ukuzivocavoca okunjalo kuthuthukisa umsebenzi wenhliziyo nokukhuthazela, ukuthuthukisa isimo sengqondo, ukunciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka.
Kubalulekile ukuthi ukubhukuda kuyindlela encane kakhulu yokushisa amakholori amaningi. Yingakho i-aqua aerobics yathandwa kangaka. Umthwalo umzimba owutholayo lapho usebenza umzimba emanzini uzizwa ungaphansi kakhulu kunomhlaba, kodwa ukusebenza kwawo akuncane. Njengoba kulula ukusebenza emanzini, kungenzeka ukuthi usebenze kabanzi "ezindaweni ezinenkinga" ngokugcwele. Nakuba kulula - umqondo ohlobene: ugijime emanzini - akusikho kuwe ukuyeka ukusebenza. Kodwa ngenxa yalokho, uzothola isibalo esincane futhi esifanele, isikhumba esikhulayo nokujabula.
Kuyasiza futhi ukubhukuda ngoba umfutho wegazi wehla, futhi, ngenxa yalokho, ingozi yezifo zenhliziyo iyancipha. Ukubhukuda kunciphisa izinga lokushaya kwenhliziyo. Amanzi akhulisa ukulinganisela kwemisipha, ngakho-ke abagijimi abaqeqeshiwe kufanele bachithe ingxenye yokuqeqeshwa emanzini.
Ukuze uvimbele amanzi ahlobongiwe ukungena ebusweni bakho bese ubangela ubomvu, sebenzisa izigqoko zokubhukuda;
Hamba uzungeze echibini ngezicathulo zenjoloba;
Sebenzisa ishawa ngaphambi nangemva kwechibi;
Awukwazi ukubhukuda masinyane emva kokudla, kungcono ukulinda ihora.
Kungenzeka yini owesifazane okhulelwe ukuba avakashele echibini? Bangaki odokotela, imibono eminingi kangaka. Abanye bayaqiniseka ukuthi ayikho indawo yabesifazane abakhulelwe. Okungenani ngoba usuku ngokusebenzisa echibini kunamakhulu abantu - futhi wonke umuntu unamakhemikhali awo. Futhi kukhona ingozi yokuthutha emathini amanzi, ukubamba amakhaza, njll.
Abanye odokotela bakholelwa ngokujulile ukuthi ukukhulelwa akusona isifo futhi ngokwayo akuyona into ephikisanayo yokuhlala emanzini. Futhi uma ubumba ngokujulile, ukubhukuda kwabesifazane abakhulelwe kuyasiza. Yiqiniso, asikhulumi ngokudoba emadolobheni amafushane futhi amade okwesikhashana, kodwa mayelana nokuzivocavoca okukhethekile okomama abalindile. Akuyona ize ukuthi kuzo zonke izifunda zomhlaba echibini lokulungiselela abesifazane abakhulelwe bokubeletha bebekhona iminyaka engaphezu kwengu-20. Phakathi nalesi sikhathi, amandla okuphulukisa echibini, izinzuzo zokubhukuda, ukuvivinya umzimba emanzini kwakufundwe kahle.
Amanzi amantombazane alindelekile ngoba akuvumela ukuba uphumule futhi unciphise ukucindezeleka okuvela emisipha, evame ukuba nesisindo somzimba esengeziwe. Nokuzivocavoca umzimba emanzini - lokhu kungcono ukulungiswa ngokomzimba kokubeletha kwalabo abangakaze bahlanganyele ezemidlalo. Emanzini, umthwalo ongokwenyama awuzwa, ngoba umzimba unesimo esingenasisindo, futhi konke ukunyakaza kuyanciphisa.
Kulula ukubamba ukuphefumula kwakho emanzini, kodwa kuhle kuphela kwanezinyane. Uma uqonda, ukucindezeleka okuqhubekayo kokuphefumula kumama egazini kuhlanganisa i-carbon dioxide. Ekuboneni kokuqala - lokhu akulungile: i-oxygen encane itholakele ingane. Kodwa kusukela kulokhu uqala ukuphoqa ngokwengeziwe, "ukuzuza" yena umoya odingekayo, futhi lokhu kubaluleke kakhulu. Ehamba ngokufudumele, akakwazi ukuba nesisindo futhi uzozalwa kalula futhi ngokushesha. Futhi i-carbon dioxide, lapho "ayokwazi khona" ngakho, ngesikhathi sokubeletha ngeke kubangele ukubulawa kwendlala yomoya. Kuqaphela ukuthi ngokuvamile izingane zomama ezihambayo azihlushwa yi-hypoxia ne-asphyxia, futhi uma kukhona intambo engakazelelwe yezintambo zomzimba, umntwana uyashintsha kalula futhi ngokushesha.
Ukuzivocavoca ukulibazisa ukuphefumula kufanele kwenziwe ngale ndlela: ngemuva kokuphefumula okukhulu, siphumelela emzimbeni we-embryo, simboza ngamadolo ethu ngezandla zethu futhi sinciphisa ikhanda lethu emanzini. Sizama ukuhlala kuleli zwe isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uma lokhu kusetshenziselwa ukuphindaphindiwe njalo, uzobona ukuthi isikhathi ngasinye ungakwazi ukubamba umoya wakho isikhathi eside. Futhi ungakhohlwa ngalesi sikhathi ukuphumula umzimba wonke futhi ungacabangi ngalutho.
Ukudilika okuningi kusiza ukunqoba ukwesaba kwamanzi. Akuyona imfihlo ukuthi abaningi bethu besaba njengomlilo. Kwesabeka okungaziwa, okungavikeleki nokungakwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi. Ukubeletha nakho akungaziwa, futhi isimo sokungavikeleki okuphelele. Futhi ukuqeqeshwa kwamanzi kusiza ukunqoba wena futhi ukulungiselela kwengqondo ukulungiselela ukubeletha.
Ekukhulelweni kokuqala, ukuvakashela echibini kuzosiza ukuqeda ikhanda, ku-third and third trimester - kusukela e-edema naseqenjini eliphakeme legazi. Futhi echibini lingabasiza labo abanelungiselelo elingalungile lomntwana esibelethweni (isethulo sesibonakaliso). Inhlanganisela yokudoba kanye nokuzivocavoca okukhethekile kungasiza ingane ukuba iphenduke kuqala, ngisho nasekukhulelweni kwakamuva.
Ngaphambi kokuba uvakashele echibini lokubhukuda, thintana nodokotela, ungaba nokuphikisana komuntu ngamunye;
Khetha ichibi, okudingayo isitifiketi esivela kudokotela: ngakho-ke ukuqiniseka okukhulu ukuthi akekho othetheleleka nawe oseduze;
Lapho bevakashela echibini, odokotela batusa ukusebenzisa ama-tampons ukugwema ukuthola ukutheleleka. Kodwa kuphela esimweni sokuthi awunaso isifo semvubelo nezifo ezithathelwana ngocansi. Ngemuva kwalokho konke, khona-ke i-tampon ingaphazamisa umthamo wesifazane.
Ngokuvamile izingane ziqala ukufunda ukugebha kusuka eminyakeni engu-3-4, uma ingadi ibhuku lokubhukuda. Futhi uma kungenjalo, kamuva. Kodwa eGibhithe lasendulo, izingane zazingesabi ukudoba kusukela ekuzalweni, ukuqinisa impilo yamasosha esizayo. Yebo, kusukela ezinsukwini zokuqala kanye namaviki okuphila, izingane zafundiswa ukwenza imishini emanzini. Ogogo, abajwayele ukuhlonipha ingane yabo, bangabamba amakhanda abo, kodwa "ukugebha" okungenjalo okungokwemvelo kukhona. Phela, ingane ngisho nangaphambi kokubeletha esibelethweni yayihlala endaweni ehlanzekile - i-amniotic fluid. Amanzi kuye akuyona into ehlukile. Ngakho-ke, ukucwiliswa emanzini, ukungabi nesisindo kuye akuyona isimo esicindezelayo, kodwa ukubuyela esikhathini esedlule lapho efudumala futhi ekhululekile esiswini sikamama wakhe.
Futhi okwamanje kuyathakazelisa ukuthi ikhono lokubhukuda - ikhono elingenasici lezingane. Kuyaphawula ukuthi ngokushesha nje lapho ubuso bomntwana buthola amanzi, ubhekana nokuphefumula. Le ngqungquthela iyasiza kuye uma udilika. Kodwa uma engafundi ukugibela ngemuva kokuzalwa, ngeke asebenzise leli khono futhi ngezinyanga ezintathu uzofa ngokuphelele. Izifundo zakuqala zokubhukuda zisiza ukuhlanganisa le ncamashi ewusizo futhi yenze umkhuba.
Uma isikhathi singaphuthelwa, kuze kube yilapho sekuyiminyaka engu-3-4 ubudala, ngeke kube nzima ukufundisa ingane ukuthi ibhukude. Kuphela kule minyaka kuphela angakwazi ukwenza imiyalo yomfundisi. Ngakho-ke, iminyaka engcono kakhulu yokuqala ukuthuthukiswa kwamanzi wezingane okhulisa izingane zikholelwa amasonto 3-4 okuphila.
Imithi esemthethweni iye yabona izinzuzo zokubhukuda izinsana, futhi manje zenziwa emitholampilo eminingi yezingane lapho kunezinhlanzi zezingane. Kuqaphela ukuthi izingane ezibhukuda zivame ukukhula ngokushesha. Ukubhukuda kuwusizo nge-curvatures ezihlukahlukene zomgogodla kanye neziphambeko zokuma. Ingane, njengoba ilahle iphakethe le-diaper kanye ne-raspashonok, ingahamba emanzini njengoba inhliziyo yakhe ifisa. Lokhu kuqinisa umgogodla, imigudu nemisipha. Lo mthwalo uphephile kuye, ngoba imigqa emanzini ngeke ivule phambili.
Ezinganeni ezibuthakathaka, inzuzo yokubhukuda yukuthi ukuzivocavoca emanzini kukhuthaza ukuthuthukiswa kwengqondo. Ezinganeni ezikhukhumezayo zihamba ngenjabulo. Amanzi asiza nge-colic nokuqothulwa, kusiza ukuthuthukisa ukulala nokudla. Futhi-ke, amanzi yiyona ndlela engcono kakhulu yokuqina. Ngenkathi ingane iqhuma, ukuphefumula kwayo kuyanda, okusho ukuthi igazi liye lenziwe nge-oxygen. Konke ndawonye kwandisa ukumelana komzimba wengane. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi izingane ezihilelekile ekubhukuda zigula kaningi kakhulu. Futhi okubaluleke kakhulu - ukubhukuda kuvela eminyakeni yokuqala ukudala imizwelo emihle. Izingane ezikhukhulayo ngokuvamile ziziphatha kahle, zilale kahle futhi zidle kakhulu.
Xhumana nodokotela wezingane. Kungakhathaliseki ukuthi ukubhukuda okuwusizo kangakanani, unama-contraindications. Iphikisana ne-TB yesifo sofuba esigabeni esivulwe, izilonda zentliziyo ye-rheumatic esigabeni esicacile, izifo ezithintekayo zesimiso senhliziyo (isibonelo, ukuhluleka kwenhliziyo). Ngezilonda zesisu, izifo zamehlo (conjunctivitis, blepharitis, keratitis), kanye nezilonda ezivulekile, izifo zesikhumba (i-eczema, i-fungal kanye nezifo ezithathelwanayo).
Ngaphambi kokuqala kwezifundo ingane kufanele ibe nephilile, yiyo yonke i-ORVI kanye nokubandayo.
Ungashiyi ingane emanzini engalindelwe umzuzu.
Ukuzivocavoca ukuvuka kalula komzimba
Izinzuzo zezempilo zezinhlobo ezahlukene zokuzivocavoca
I-Physiotherapy umzimba ekuziphatheni komzimba
Imikhiqizo ewusizo nokudla okumnandi
Ukudla: konke okuphathelene nokudla nokudla
Indlela yokuzivocavoca kahle ukufeza isisindo
I-RoomGuru - usesho lwehhotela olunengqondo nokubhuka
Indlela yokuphefumula ngokunembile uma ubhukuda?
Abantwana abahamba ngezinyawo: izinzuzo nezingozi
Imali yiyona eyakhelwe kakhulu isintu
Biography of Mikhail Kokshenov
Indlela yokugqoka abakhulelwe
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-23
Indlela yokwandisa i-eyelashes ngokuzimela ekhaya
Ubuningi bamaShayina nenyama